Real Madrid oo isticmaalaysa mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah si ay u hesho Eden Hazard – Gool FM
Real Madrid oo isticmaalaysa mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah si ay u hesho Eden Hazard
Haaruun February 9, 2019
(Madrid) 09 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay isticmaali doonto ciyaaryahankeeda Isco si ay Chelsea uga hesho Eden Hazard.
Macallinka kooxda ka dhisan caasimadda ee Santiago Solari ayaan ka helin qaab ciyaareedkan xiddiga xulka qaranka Spain ee Isco sidaas darteed waxaa looga faa’iideysanayaa sidii ay Los Blancos ku heli lahayd Hazard.
Wargeyska Daily Mail ayaa warinaya in kooxda Real Madrid ay Isco qeyb uga dhigi doonto heshiiska ay naadiga Chelsea uga soo qaadanayso xiddiga xulka qaranka Belgium ee Eden Hazard.
Isco ayaan dooqa koowaad u ahayn macallinka Madrid ee Santiago Solari, sidoo kale wax taageero ah kama helin xiddigaha ay isku kooxda yihiin sidaas awgeed waa uu ka tagi karaa caasimadda Spain.
Yeelkeede, kooxda Real Madrid ayaa ku faraxsanaan lahayd in Isco uu aado England haddii ay helayaan Hazard, laakiin ma jiro wax damaanad qaad ah oo dhanka Chelsea ah, iyadoo weeraryahanka reer Belgium ay sidoo kale xiisanayaan kooxo kale oo ka dhisan horyaalka Premier League.
Waa sidee rikoorka Eden Hazard ee kulamada uu wajahay Kooxda Man City ka hor kulanka habeen dambe ee Premier League?
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Manchester City vs Chelsea ka hor kulankooda habeen dambe… (The Blues oo la qadiyay!)